The Ab Presents Nepal » अब गरीब क्षेत्री-बाहुनलाई पनि आरक्षण दिनुपर्छ!
अब गरीब क्षेत्री-बाहुनलाई पनि आरक्षण दिनुपर्छ!
काठमाडौं-: संविधानको प्रावधान बमोजिम विभिन्न जाति, समुदायले विभिन्न सरकारी निकायमा आरक्षण सुविधा लिइरहेका छन्। लोक सेवाले कर्मचारी भर्ना गर्दा आरक्षणका आधारमा निश्चित सिट सुरक्षित गर्ने गरेको छ।
सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बढुले आरक्षणको व्यवस्था गर्दा आर्थिक अवस्थालाई आधार बनाउनुपर्ने बताए। ‘आर्थिक रुपमा पछि परेकालाई आरक्षण दिनु न्यायसंगत हुन्छ। संविधानले खस आर्यलाई पनि समेटेको छ। आर्थिक र पछि परेकालाई छनौट गरौं, समावेशी गर्दा त्यसमा खस आर्यलाई पनि समेटौं,’ उनले भने।
समाजवादी पार्टीका सांसद राजेन्द्र श्रेष्ठले संविधानको भावना अनुसार खसआर्यको हकमा आर्थिक रुपमा विपन्नलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए। सांसद झपट रावलले संघीय मामिमा तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डित र मन्त्रालयका सचिवलाई प्रश्न गर्दै भने, ‘म जुन समुदायबाट आएको छु मेरो उपस्थिति कहाँ हुन्छ ?
खसआर्यको घरमा जन्मँदासाथ त्यो सम्पन्न भएर आउँछ ? यो संविधानले दिएको अधिकारको विपरीत छ। कुनै व्यक्ति कुनै जातमा जन्मिनु उसको अभिसाप हो ? यसमा प्रष्ट गरौं। यसले संविधानले दिएको मौलिक हक, समानताको हक, रोजगारीको हकलाई कुण्ठित गरेको छ। यो विधेयक विभेदकारी छ।’
आरक्षण गर्दा आर्थिक सम्पन्नता वा विपन्नताको आधार बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए। सांसद रावलले आफूसँगै बसेका सांसद राजेन्द्र श्रेष्ठलाई देखाँउदै भने, ‘राजेन्द्र श्रेष्ठको १ धुर जग्गा र सुदूरपश्चिममा भएको मेरो बाउबाजेको सबै जग्गा जोड्यो भने पनि राजेन्द्र श्रेष्ठको बढी हुन्छ।
राजेन्द्र श्रेष्ठले चाहिँ आरक्षण पाउने मैले नपाउने हुन्छ ? भाषालाई आधार मान्ने हो भने मैले बोलेको भाषा तपाईंहरूले पनि बुझ्नुहुन्न। मैले बोल्ने भाषा बोलें भने तपाईंहरू सबै यहाँबाट उठेर जानुहुन्छ। भाषा मात्रै ठूलो कुरा हो ? एउटा भाषा बोल्दैमा उसलाई संरक्षण गर्नुपर्ने ?
भाषा र जातका आधारमा आरक्षण दिने कुरालाई पूर्णरुपमा परिवर्तन गर्दै आर्थिक रुपमा विपन्न भएकालाई एउटा मापदण्डका आधारमा आरक्षण दिन माग गरेका छन्।एक जना रेग्मी मन्त्रालयको सचिव भयो भने सबै रेग्मीहरू सम्पन्न भए ? यो समानताका सिद्धान्तविरुद्ध छ। यसलाई पुनः जीरोबाट परिवर्तन गर्नुपर्छ। अघि मैले खाएँ, मेरो नाति अघायो भन्न पाइन्छ ? उनले सोधे।
सांसद नवराज सिलवालले आरक्षणको व्यवस्था निश्चित समयका लागि मात्र राख्नुपर्ने बताए। ‘भारतले पनि आरक्षण हटाउँदै गएको छ। सधै आरक्षण राखेर समृद्धिको कुरा हुँदैन। प्रत्येक १० वर्षमा आरक्षणको व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गर्दै जाने व्यवस्था पनि यसमा थपौं उनले भने।
त्यसमा महिला ३३ प्रतिशत, आदिवासी जनजाति २४ प्रतिशत, मधेशी २० प्रतिशत, दलित ९ प्रतिशत, थारु ४ प्रतिशत, मुस्लिम ३ प्रतिशत, पिछडिएको क्षेत्र ४ प्रतिशत र अपाङ्गता भएका व्यक्ति ३ प्रतिशत आरक्षण छुट्याइएको छ। साभार : लोकपाटी